Ederede Tattoo maka Ụmụ nwoke - Atụmatụ Echiche Echiche
Ederede Tattoo maka Ụmụ nwoke
Ana m agbagha agha maka ihe ziri ezi, Taa m na-ekwu uche m, ọ bụrụ na ọ na-egbu m n'abalị a, m ga-adị njikere ịnwụ, dike anaghị atụ egwu inye ndụ ya, dike nwere ike ịzọpụta m naanị oge
Ekwughị ya ịbụ esemokwu Ọ pụtaghị na ị ga-abụ nsogbu
Mụta site na ụnyaahụ, ndụ maka taa, Olileanya maka echi.
Na oge nke a kwa gabiga
"Ozugbo ị dị adị ị pụghị ịghọghachi ihe efu. Ọ na-adịru mgbe niile. "
Kwuo nrọ gị
Nna m gwara m otu ụbọchị. Otu ndụ, otu ịhụnanya, otu obodo
Ọ bụrụ na ịchọrọ udo Jikere maka agha
"Ekwela ka uche gị gbochie gị inwe oge dị mma."
Ndụ na-aga n'ime gị n'enweghị gị
Cheta na ị bụ naanị na ị ga-agbapụtaghachi na 3: 18
Site n'ike n'ime m ga-aga nke ọma
Hụ ndụ ị na-ebi ndụ, Bie ndụ ị hụrụ n'anya
Ị bụ ihe ị hụrụ n'anya na ihe ị hụrụ n'anya
Ọ bụrụ na ị kwụghị maka ihe ị ga-ada maka ihe ọ bụla
Kwa ụbọchị bụ ụbọchị iji bụrụ nnukwu
Naanị mgbe m jere ije na hel ka m hụrụ ọnụ ụzọ ámá nke eluigwe
Mara onwe gi ihe nile n'adighi ike
Ịhụnanya dị naanị nne
Onye achọrọ ọtụtụ ihe dị ukwuu
M ga-esi ike ma nwee obi ike na agaghị m atụ ụjọ ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ; n'ihi na Jehova, bú Chinekem, nọyerem n'ebe ọ bula m'gāga. Joshua 1: 9
M na-eje ije na ndagwurugwu onyinyo ọnwụ m agaghị atụ egwu ihe ọjọọ n'ihi na chi m nọ n'aka m - Abụ Ọma 23: 4
Udo nke apughi imuta na ndu m nwere ike inweta n'onwu
Ilu 3: 5-6 Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi ma dabere na nghọta gị; N'uzo-gi nile mara Ya, Ọ gēme ka okporo-uzọ-Gi nile zie ezie.
Ndị Galetia 2: 20 A kpọgidere m n'obe Kraịst, anaghịkwa m adị ndụ ọzọ, ma Kraist bi n'ime m. Ndụ m na-ebi ugbu a n'anụ ahụ, m na-adị ndụ site na okwukwe na Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nye onwe ya maka m.
Ka ifufe na-adị n'azụ gị, anyanwụ na-echekwa ihu gị, ka ikuku nke ọdịda gị nwee ike ịkwado gị iji kpakpando gbaa.
di na nwunyendị mmụọ oziegbu egbu okpuna-egbu egbunnụnụegbugbu egbugbuenyí egbu egbuọdụm ọdụmọnwa tattoosmehndi imeweagbụrụ eboụkwụ akaegbu egbu maka ụmụ nwokeegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbuudara okooko osisiUche obiegbu egbu mmiriGeometric Tattoosenyi kacha mma enyiakwara obimma tattoosakara ntụpọEgwu ugongwusi pusiỤdị ekpomkpaaka mma akaegwu egwuegbu egbu osisi lotusegbu egbu ebighi ebikoi ika tattooaka akaAnkle Tattoosrip tattoosegbu egbu hennaegbu egbu egbuna-adọ aka mmaaka akan'olu oluụmụnne mgbuazụ azụzodiac akara akaraNtuba ntughariokpueze okpuezeakpị akpịima ima mmandị na-egbuke egbukeegbu egbu diamondarịlịka arịlịkaechiche egbugbu